माघे सङ्क्रान्तिका लागि तरुल किन्नेको भिड, पाताले तरुलको माग धेरै
सोमवार, माघ १०, २०७८ ०५:४२:०१ युनिकोड
राष्ट्रिय सभा चुनाव : आज रातिदेखि माैन अवधि, के–के गर्न पाइँदैन ?
'तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिन्छ'
माओवादी पदाधिकारीको निर्वाचन माघ २७ मा गर्ने निर्णय
नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि
२४ घण्टामा ६ हजार ४ सय ६२ जनामा काेराेना पुष्टि, सङ्क्रमण दर ३७ प्रतिशत
टेकु अस्पतालमा एक हप्ताका लागि खोप अभियान स्थगित
आयाेगले भन्दैमा पार्टीकाे मूल सिद्धान्त नै संशाेधन गरेर जान सकिँदैन : अध्यक्ष लिङ्देन
पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
शुक्रवार, पुष ३०, २०७८ सत्यकलम संवाददाता
काठमाण्डाै – भाेलि शनिवार मनाइने माघे सङ्क्रान्तिका लागि काठमाण्डौको बजारहरूमा तरुल किन्नेको चहलपहल बढेको छ । काठमाण्डाै उपत्यकाका दुई ठूला तरकारी बजार कालीमाटी र बल्खुमा तरुलको चाङ नै लागेको छ । यी थोक बजारमा तरुल किन्न बिहानैदेखि उपभोक्ताको भिड छ । बजारमा हिजो बिहीवारदेखि नै तरुल किन्ने र बेच्नेको भिड बढेको छ । दाउराका हार जस्तै गरी तरुल मिलाएर राखिएका छन् ।
बजारमा धेरैजसो सर्लाही जिल्लाबाट तरुल भित्रिएको छ । खान मिठो र अन्य तरुल भन्दा सस्तो हुने भएकाले तराईका जिल्लाको तरुलको कारोबार धेरै हुने गरेको छ । यसपालि पाताले तरुलको पनि कारोबार बढेको छ । महँगो भए पनि स्वादिष्ट हुने भएकाले चितवनको पाताले तरुलको माग बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
विशेषगरी चितवनको पाताले तरुल, घर तरुल, वन तरुल, हात्तीपाइले तरुलको माग धेरै रहेको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार पोहोर, परार भन्दा यसपालि पाताले तरुलसँगै हात्तीपाइले तरुलको कारोबार धेरै छ । उत्पादन धेरै भएकाले पोहोरको भन्दा हात्तीपाइले तरुल यसपालि केही सस्तो छ । अन्य तरुलको भाउ पनि खासै नबढेको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार व्यवसायिक संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
आज बजारमा तराईका जिल्लाको तरुल किलोको ६० देखि ७० रुपैयाँ, हात्तीपाईले तरुल किलोको ७० देखि ८० रुपैयाँ, वन तरुल किलोको एक सय ७० देखि एक सय ८० रुपैयाँ, चितवनको पाताले तरुल किलोको एक सय ८० देखि एक सय ९० रुपैयाँ, स्कुसको जरा किलोको एक सय ४० देखि ए कसय ५० रुपैयाँ र पिँडालु किलोको ४० देखि ५० रुपैयाँ थोक मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।
बारा, चितवन, धादिङ, दोलखा, गोरखा, झापा, काभ्रे, मकवानपुर, नवलपरासी, मोरङ, सर्लाही, सिन्धुली, पाल्पा, सुनसरीलगायतका जिल्लामा तरुल र पिँडालु उत्पादन हुने गरेको छ । यसपालि काठमाण्डौमा पाल्पाबाट खासै तरुल भित्रिएको छैन । सर्लाही र सुनसरीबाट भने आवश्यकताअनुसार तरुल भित्रिएको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यको भनाइ छ ।
बजारमा १०–१२ किसिमका तरुल पाइए पनि मुख्य गरी घर तरुल, वन तरुल, सिमल तरुल, तराईका जिल्लाको तरुल, पाताले तरुल र हात्तीपाइले तरुलको कारोबार धेरै हुने गरेको छ । यस्तै बजारमा तरुलसँगै घिउँ, चाकु र सखरर किन्नेको भिड पनि बढेको छ ।
source : ujyaalo online
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, पुष ३०, २०७८, ०९:१९:००
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कोरोना सङ्क्रमण
बेमौसमी वर्षाले क्षति गरे पनि दाङमा यो वर्ष धान उत्पादन बढ्यो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो
सार्वजनिक ठाउँ वा गाडीमा यात्रा गर्दा मास्क लगाए-नलगाएको बारे अनुगमन सुरु
राष्ट्रिय सभा चुनाव : आज रातिदेखि माैन अवधि, के–के गर्न पाइँदैन ? आइतवार, माघ ९, २०७८
शेयर बजार झन्डै ११ अङ्कले घट्यो, सात अर्ब तीन करोड रुपैयाँको कारोबार आइतवार, माघ ९, २०७८
राष्ट्र बैंकले फेरि भन्यो– ‘क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क माकेर्टिङको कारोबार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ’ आइतवार, माघ ९, २०७८
दुई दिन घटेको शेयरबजार आज ३३ अंकले बढ्यो, पाँच अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कारोबार बिहिवार, माघ ६, २०७८
त्रिविका सबै क्याम्पसमा ११ गतेदेखि अनलाइन कक्षा, अनलाइनबाटै परीक्षा गर्न कार्यविधि बन्ने
खोपको कुनै अभाव छैन, अझै ४ करोड डोज मौज्दात छ : स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा
©Satya Kalam-2022 All rights reserved.